चिरञ्जीवी ओली बने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव, को हुन ओली ? - Arthapage
चिरञ्जीवी ओली बने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव, को हुन ओली ?
नेपालगन्ज २८ माघ – नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिवमा चिरञ्जीवी ओली निर्वाचित भएका छन् ।
संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट मंगलवार ओली महासचिव चुनिएका हुन ।
यसअघि अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, कार्यसमिति सदस्य, एशोसिएट र बस्तुगत सदस्यको निर्वाचन भइसकेको छ । उनीहरुकै आन्तरिक चुनाव वा सहमतिबाट महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत बरिष्ठ सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
को हुन ओली ?
असल शासनको अभियानता, पत्रकारिता हुँदै नेपालगन्जका व्यापार व्यवसायमा सफल भएका युवा व्यवसायी हुन, चिरञ्जीवी ओली । असल शासनको अभियानताका रुपमा कुनै बेला उनी बाँकेका गाउँ–गाउँमा पुगेर सुशासनका लागि जनता जगाउँथे । बाँकेको असल शासनको सुरुवाती चरणका थोरै मात्र अभियानतामा उनी पनि पर्छन् ।
असल शासनको अभियानताका रुपमा काम गदै गर्दा ओलीले ६० सालपछि रेडियो भेरी आवाजबाठ सक्रिय पत्रकारिता सुरु गरे । असल शासन अभियानमा लाग्दा लाग्दै अब पत्रकारिताका माध्यमबाट समाज सुधारको काम गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारिता सुरु गरे । उनले चलाएका रेडियो बहस र सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । उनले थुप्रै स्रोता कमाएका थिए ।
जतिबेलासम्म सक्रिय पत्रकारितामा रहे मैले इमानदारितापूर्वक काम गरे । पेशागत मर्यादालाई उचो राखे । २०६६ सालपछि भने व्यवसायमा हात हाले । ओलीले केही समय कोल्ड स्टोर हुँदै त्यसपछि मोवाइलको डिलरमा हात हाले । उनी प्रोपराईटर रहेको ओली टे«ड लिंक लाभा मोवाईलको डिलर हो । ओली जुन पेशा व्यवसाय अपनाउँछन् त्यहा लगनशिल र इमानदार भएर काम गर्छन । यही कारणले उनको फर्म उत्कृष्ट बन्दै पटक पटक पुरस्कृत भएको छ ।
व्यापार व्यवसाय गर्ने मात्र होइन व्यवसायीको हकहितमा समेत सक्रिय हुँदै आएका छन् । उनी व्यवसायीका यस्ता युवा नेताका रुपमा स्थापित छन् जो निडर भएर व्यवसायीका पक्षमा जहाँ पनि बोल्ने सार्मथ्य राख्छन् । नेपालगञ्ज इलेक्ट्रोनिक्स एशोसिएसनको संस्थापक महासचिव हुँदै अहिले अध्यक्ष छन् । भर्खरै स्थापना भएको उक्त एशोसिएसनलाई स्थापित गर्न उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका छन् । आज इलेक्ट्रोनिक्स एशोसिएसन छोटो समयै व्यवसायी माझ चिनिन सफल भएको छ । ओली नेपाल मोवाइल बितरक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन ।
व्यवसायीकको हकहितका पक्षमा खुलेर जस्तो सुकै निकाय र व्यक्तिगत कुरा गर्न ओलीले संकोच मान्दैनन् । दिन होस् चाहे रात ! कुनै व्यवसायी समस्यामा पर्दा सूचना पाउँदा साथै घरदैलोमा पुग्ने उनको स्वभाव धेरैका लागि अनुकरणीय छ । बिषयगत मुद्दालाई टपक्क टिपेर ती मुद्दालाई सटिक ढङ्गले राख्ने भएकै कारण धेरै व्यवसायीले ओलीलाई निडर व्यवसायीको नेताका रुपमा चिन्छन् । संघर्ष्शिल इमानदार र निडर स्वभावका ओली महासचिवमा निर्वाचित भएपछि आगामी दिनमा व्यवसायीक मुद्दा सशक्तरुपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः 4:25:05 PM |
Prevभवानी राणा सहित २५ जना व्यवसायीलाई सीआईपी अवार्ड, के हो सिआईपी ?
Nextनेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको उपमहासचिवमा धर्मराज अर्याल